"Avy tany Egypta no niantsoako ny zanako."
Ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly dia milaza an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra.
Ny Testamenta Taloha (OT) dia milaza fa manan-janaka Andriamanitra. Ary izay voasoratra momba an'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Taloha dia tanteraka ao amin'ny Testamenta Vaovao (NT).
"Avy tany Egypta no niantsoako ny zanako"
Faminaniana sy GT
Tamin'ny 11: 1: "Fony mbola tanora Isiraely dia nifankatia taminy aho ary niantso ny zanako tany Egypta ."
Ny fahatanterahana ao amin'ny NT
Matio 2:15: "Ary nijanona teo izy mandra-pahafatin'i Heroda, mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo tamin'ny mpaminany hoe: Avy tany Egypta no niantsoako ny zanako ."
Iza no anaran'ny zanany lahy?